UMato uvele wacula ingoma kaTira ethi “Hamba uzongikhumbula” ebuzwa ngoNcikazi - Impempe
UMato uvele wacula ingoma kaTira ethi “Hamba uzongikhumbula” ebuzwa ngoNcikazi
June 17, 2021 June 16, 2021 Impempe.com
‘Hamba, wena uzongikhumbula’. Lena yindlela aphendule ngayo usihlalo weLamontville Golden, uMato Madlala, ngesikhathi ebuzwa ukuthi akesabi yini ukushiywa ngumqeqeshi uMandla Ncikazi. Lo mbuzo ubuzwe ngenxa yokuthi uNcikazi wenze kahle kakhulu naBafana Bes’thende ngesizini esanda kugoqwa.
“Emhlabeni akekho umuntu okwazi ukumvimba. Kuyaye kuthiwe hamba, uyongikhumbula. Angithi usho kanjalo uTira?
“Uneculo lakhe athi hamba uyongikhumbula, athi hamba… athi kodwa uyongikhumbula. Ngakho umuntu awumvimbi. Nengane uma ithinta umlilo oshisayo uyaye uyiyeke, ngeke iphinde isondele,” usho kanje uMadlala ngoJuni 11.
Akwaziwake noma uMadlala, obuye abe yisikhulu esiphezulu kwiPremier Soccer League (PSL), ubesevele azi yini ukuthi angase ahlukane noNcikazi kungekudala.
Kumangale bonke abathandi bebhola ngoLwesithathu ebusuku ngesikhathi i-Arrows ikhipha isitatimende iveza ukuthi isihlukene nomqeqeshi uNcikazi.
“ILamontville Golden Arrows nomqeqeshi uMandla Ncikazi sebefike esivumelwaneni sokuthi bahlukane ngesihle,” besifundeka kanje isitatimende se-Arrows.
Nokho impempe.com ivundulule ukuthi uNcikazi ufana nentombi entsha endaweni eshelwa ubuthaphuthaphu.
Kukhona abakhomba lo mqeqeshi kwi-Orlando Pirates, kanti abanye bamkhomba kwiSuperSport United. Abanye bathi uya kuTshakhuma Tsha Madzivhandila, bese kuba khona abammatanisa neSwallows. NakwiSafa kuyasolakala ukuthi uyakhona. Ngabe uNcikazi uthole amadleloaluhlaza?
“Angikholelwa mina ekuvimbeni noma ubani. Uma ubona amadlelo aluhlaza ngiyaye ngithi wajahe, kukhona abazoqhamuka. Nani nilana nje baningi ozakwenu ababekhona ngaphambi kwenu, badlulela phambili kwangena nina.
“Ngakho kubalulekile ukuthi sithuthukise abantu abaningi. Uma ngabe usuthuthukile usubona ukuthi usungandiza, kubalulekile ukuthi udedelwe undize. Hhayi kabi futhi,” kusonga uMadlala i-Arrows ingakahlukani noNcikazi.
Ngaphansi kukaNcikazi i-Arrows iqede endaweni yesine kwilogi yeDStv Premiership. Abafana Bes’thende kwale kancane ukuthi bazibekisele indawo kwiCAF Condeferation Cup, okuyindawo egcine ithathwe yiPirates sekusongwa imidlalo yeligi.
UNcikazi ukuvezile ukuthi akuxatshenwe, wabonga ithuba alinikiwe. “Ngithatha leli thuba ukuqinisekisa ukuthi sesinqume ukubuqeda ubudlelwano bethu beminyaka. Ngiphuma anginanxa, ngithwele izinkumbulo ezinhle kuphela.
“Ngibonga usihlalo ngakho konke angenzele khona emsebenzini wami… ukwanda kwaliwa wumthakathi, izandla zidlula ikhanda. Esikhulume ngakho emhlanganweni kumele kugcinwe kuyimfihlo njengokuvumelana kwethu. Ngethemba ukuthi lokho kuzohlonishwa. Ngilifisela okuhle kodwa iqembu,” kusho uNcikazi.
Previous Previous post: Angase avumbuke kwiPirates noma kwiSuperSport uNcikazi ohlukane ne-Arrows
Next Next post: Usezikhindini umshayisibhakela ‘ontshontshe ifoni’